डरावना क्यासल यसको प्रयास प्राप्त संभावना संग तपाईं तर यसको बरु प्यारा देख राक्षस तर्साउन मा बुरी तरिका असफल 3,247 पटक आफ्नो खम्बा यो एक मनोरंजक स्लट फोन क्यासिनो खेल पक्कै बनाउन.
खौफनाक महल को विकासकर्ता बारेमा
मा स्थापित 2014, मौका नयाँ कम्पनी तर केही धेरै फैशनेबल र सुविधा-सम्पन्न अनलाइन खेल विकास अनलाइन गेमिङ को क्षेत्र मा एक होनहार सुरु गरेको छ कि एक कम्पनी हो. यो स्लट फोन क्यासिनो खेल एक यस्तो खेल सम्भावना विकास छ (NYX).
यो स्लट फोन क्यासिनो खेल पाँच रील आउँछ र खेल प्ले छ 25 paylines. तर यी paylines निश्चित छैन र वृद्धि वा आफ्नो रुचि अनुसार घट्यो गर्न सकिन्छ. प्रत्येक स्पिन मा शर्त रकम पनि निश्चित छैन र प्रति स्पिन £ 625 को 25p देखि सुरु. यो स्लट फोन क्यासिनो खेल जस्तै आइओएस रूपमा उपकरणहरू को एक नम्बर मा प्ले गर्न सकिँदैन, एन्ड्रोइड, र स्पष्ट पीसी र ल्यापटप. तपाईं स्क्रिनमा हास्य शैली एनिमेसन चार फरक राक्षस छ. तिनीहरूले Ballie छन्, पत्थर, गणना र Squido. त्यहाँ केही मानक कार्ड प्रतीक हो9साथै ACE र तिनीहरूले प्रतीक तिर्ने कम प्रतिनिधित्व. गेम लोगो खेलको स्क्याटर प्रतीक हो. तपाईं पनि स्क्याटर प्रतीक बाहेक अरू सबै कुरा प्रतिस्थापन कि स्क्रिनमा नियमित जंगली देख्ने.
यो अन्य सुविधाहरू स्लट फोन क्यासिनो खेल हो:
अनियमित दानव Wilds- चार राक्षस को कुनै पनि आधार खेल समयमा अंधाधुंध जंगली मा नै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं आधार खेलमा धेरै चार रूपमा अनियमित wilds हुन सक्छ. अनियमित wilds पनि उच्च पेआउट दिन अन्य आधारभूत प्रतीक प्रतिस्थापन गर्नेछ.
डरावना Spins विशेषता- जहाँसुकै एकै समयमा दृश्यमा अवतरण तीन वा बढि स्क्याटर प्रतीक को यो सुविधा शुरू. स्क्याटर प्रतीक तपाईं प्राप्त मुक्त spins संख्या निर्धारण गर्नेछ यो सुविधा सुरु जो संख्या.
3 छरिन्छ तपाईंलाई इनाम दिनुहुनेछ 10 निःशुल्क spins
4 छरिन्छ तपाईंलाई इनाम दिनुहुनेछ 12 निःशुल्क spins
5 छरिन्छ तपाईंलाई इनाम दिनुहुनेछ 15 निःशुल्क spins
तपाईं मुक्त spins खेल्न सुरु गर्नु अघि तपाईं छ स्क्रिनमा वर्तमान को लुकाउने राक्षस जारी गर्न ढोका बाट ढोका चयन गर्न आवश्यक. यो सबै चार राक्षस फेला सम्म जारी हुनेछ वा सुविधा प्रारम्भ गर्नु हुनेछ जब एक ढोका पछि डरावना spins पाउन तपाईं सम्म. जारी राक्षस सुविधा अवधिको लागि wilds परिणत हुनेछ.
डरावना क्यासल सम्भावना पारस्परिक देखि रमाइलो भरिएको राक्षस-THEMED स्लट छ. यो स्लट सबै अनियमित wilds र डरावना spins जहाँ तपाईं ठूलो पेआउट प्राप्त गर्न सक्छन् छ.